विश्व Archives - Page3of 32 -
कम उमेरकी युवतीसँग सम्बन्ध राखेका कारण मन्त्रीको पद चैट
एजेन्सी । नर्वेका रक्षामन्त्री ओड रोजर एनोक्सेनले निकै कम उमेरकी महिलासँग वर्षौंदेखिको आफ्नो सम्बन्ध रहेको खुलासा भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन्। ​ एनोक्सेनको राजीनामा स्वीकारेको पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले शनिबार भने, ‘रक्षामन्त्रीको बारेमा जे कुरा बाहिरियो यसपछि यो एउटा आवश्यक निर्णय थियो।’ एन...
श्रीलंकामा हट्याे संकटकाल
एजेन्सी । श्रीलंकामा पाँच दिनअघि लगाइएको संकटकाल हटेको छ । गएराति राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेले संकटकाल हटाएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेका हुन् । गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा सरकारविरूद्ध लगातार प्रदर्शन हुन थालेपछि राजापाक्षेले गत शुक्रबार संकटकाल घोषणा गरेका थिए । श्रीलंकाको संविधानअनुसार स...
कोलम्बो । संकटग्रस्त श्रीलंकाका सम्पूर्ण मन्त्रीहरुले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् । चरम आर्थिक संकटप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणहरूले प्रदर्शन गरिरहेका बेला २६ जना मन्त्रीहरुको सामूहिक राजीनामा आएको हो । तर, प्रधानमन्त्री महिन्द राजापाक्षेले भने राजीनामा दिएका छैनन् । सरकारले लगाएको कर्फ्यूको उल्लंघन गर्दै सर...
चीनमा एकै दिन १३ हजार बढी कोभिड संक्रमित
बेइजिङ – चीनमा आइतबार एकै दिन १३ हजार १४६ जना कोभिड संक्रमित फेला परेका छन् । यो संख्या दुई वर्षअघि चीनमा सुरू भएको कोभिडको पहिलो लहरपछि अहिलेसम्मकै उच्च हो । चीनमा कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन एक दर्जनभन्दा बढी प्रान्तहरूमा फैलिएको छ । संक्रमितहरूमध्ये १४५५ जनामा लक्षण देखिएको चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगल...
आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा ३६ घण्टे कर्फ्यू
एजेन्सी । राष्ट्रिय आपतकाल लागु भएको श्रीलंकामा प्रदर्शन नियन्त्रणमा राख्न कर्फ्यू लागु भएको छ । सरकारले आइतबारदेखि ३६ घण्टाको कर्फ्यू लागु गरेको होे । आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा खाद्यान्न तथा इन्धनसहितका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको छ । यसले गर्दा प्रदर्शन हुँदै आएको छ । ती प्रदर्शनलाई नियन्त्रणम...
पाकिस्तानले अप्रिलदेखि २७ प्रतिशत पानीको अभावको सामना गर्ने
एजेन्सी - पाकिस्तानमा पानीको संकट झन् खराब हुँदै गएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । खरीफ ऋतुको (अप्रिल १) सुरुदेखि देशमा २७ प्रतिशतसम्म पानीको अभाव हुन सक्ने बिहीबार सिन्धु नदी प्रणाली प्राधिकरण (आईआरएसए)ले जानकारी गराएको हो । प्राधिकरणको सल्लाहकार समितिको बैठकले पाकिस्तान खरीफ मौसमको सुरुमा २० प्रतिशतदेखि २७ प्रतिशत...
संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति को हुन ?
एजेन्सी। संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति को हुन ? यसको बहस चर्किएको छ । गत महिना जारी गरिएको फोर्ब्सको सूची अनुसार एलोन मस्क विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्, उनको कुल सम्पत्ति २३९.३ अर्ब डलर अनुमान गरिएको थियो । यसअघि डिसेम्बर २०२१ मा, एलोन मस्कको सम्पत्ति करिब २६६ बिलियन डलर भएको अनुमान गरिएको थियो। सन् २०२१ मा एलोन...
रुस–युक्रेन युद्धको एक महिना पूरा, कहाँ कति क्षति भयाे ?
एजेन्सी - रुस र युक्रेनबीचको युद्ध सुरु भएको एक महिना पुरा भएको छ । रुसले गत प्रेब्रुअरी २४ का दिन युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेको थियो । युद्ध सुरु भएको एक महिनाको अवधिमा युक्रेनमा सात देखि १५ हजार रुसी सैनिक मारिएको दाबी उत्तर एट्लान्टिक सन्धी संगठन (नेटो)ले गरेको छ । नेटोका वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार युद्धम...
रुसी हमलामा फक्स न्युजका पत्रकार मारिए
न्युयोर्क - रुसी हमलामा अमेरिकी सञ्चार माध्यम फक्स न्युज नेटवर्कका दुई पत्रकारको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना घाइते भएका छन् । राजधानी किभ नजिकै भएको रुसी सेनाको गोलाबारीमा उनीहरुको मृत्यु भएको फक्स न्युज च्यानलले जनाएको छ । मारिनेमा ५५ वर्षीय पियरे जाक्रेजिवस्की र २४ वर्षीया ओलेकसान्द्रा सशा कुभश्यानोभा छन् । युक...
भारत विधानसभा निर्वाचन : यूपीका मुख्यमन्त्री योगी विजयी, उत्तराखण्डका धामी पराजित
काठमाडौं । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका दुई राज्यमा विधानसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको छ । नेपालको पश्चिमी सीमासँग जोडिएको उत्तराखण्ड र दक्षिणतिर सीमा जोडिएको भारतकै सबैभन्दा ठूलो उत्तर प्रदेशको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको हो । निर्वाचनमा दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । तर उत्तर प्रदेशमा ज...